Dawlada sweden oo dadkeeda midaynaysa | FooreNews
Home wararka Dawlada sweden oo dadkeeda midaynaysa
Dawlada sweden oo dadkeeda midaynaysa
FoorenewsSep 19, 2011wararka 1
Ugu yaraan Afar Kun qoys oo soomaali ah oo ku kala xayirnaa Gudaha dalka Swedan iyo dibada ayaa lagu soo waramayaa in dawlada dalka Swedan ay si rasmi ah ugu ogolaan doonto in dib loo mideeyo oo la isu keeno si ay meel ugu wada noolaadaan ugu danbayn horaanta bisha July ee sanadka 2012-ka.
Qorshahan goaankan waxa si wada jir ah ugu heshiiyay hogaanka xisbiga talada dalkaa haya iyo xisbiga kale ee lagu magacaabo Green Party (MP), goaankan oo farxad iyo raynrayn weyn u ah dhamaan xubnaha qoysaskadadka Soomaalida ah ee mudooyinka sanadaha ah kala xayirnaa, waxaana rajo weyn laga qabaa in Baaralaamaanka dalka Swedan uu dhawaan meel marin doono ansaxinta qorshahan.
Dawlada dalka Swedan ayaa hakad gelisay dib u midaynta qoysaska Soomaalida ah ee dalkeeda imanaya badhtamihii sanadkii 2010-kii, markii ay wax ka badal ku samaysay hanaankii sharciyada socdaalka.
Wakhti xaadirkan ayaa lagu soo waramayaa in dawlada Swedan ay hada xaqiiqsatay in habka kaliya ee lagu ogaan karo cadaynta xubnaha qoysaska is dhalay in ay tahay in laga qaado DNA-ga si loo hubiyo in ay is dhaleen xubnaha qoysaskaa Somaaliuda ah eek ala jooga Swedan iyo meelaha kale ee dalkaa ka baxsan.
Hadaba talaabadan dhinaca sharciga socdaalka qaxoontiga ku saabsan ee ay rajada badani ka muuqato ayaa lagu wadaa marka la meel mariyo in qoysas Soomaali ah oo qaadhaya 4 Kun oo qof oo u b adan carruur in loo ogolaado in ay yimaadaan dalka Swedan si ay ugu biiraan xubnaha qoysaskooda ee ay sanadaha kala maqnaayeen, mana cada in dadkaas qaxoontiga ah ay si rasmi ah loogu wada ogolaan doono in la siiyo deganaanshaha rasmiga ah ee dalka Swedan.
Sidoo kale, warkani waxa uu intaa ku daray in la filayo sanadka 2012-ka in dawlada Swedan ay u qorshaysay lacag lagu qadaray in ka badan Boqol iyo Soddon Milyan oo Dollarka Maraykanka ah oo u dhiganta Sideed Boqol iyo Konton lacagta Swedan ah (Kronor), iyo tayaynta fursadaha waxbarashada caruurta qoysaska aan weli la ogolaan eek u nool gudaha dalka Swedan.
Warkan oo aanu ka soo xiganay Warside lagu magaabo Wargeysa thelocal.se, ayaa intaa ku datay in dad tiradooda lagu qiyaasay Kumanaan oo Soomaali ah oo ah qoysaska ay saamaysaysay hakadka ku yimi dib u midaynta qoysaska Soomaalida ah ee dalka Swedan ayaa wakhti xaadirkan ku jira xeryo qaxoonto oo aad u rafaad badan oo ku yaala bariga Afrika, kuwaas oo maalkoodii ku waayay abaaraha, iyo dagaalada baahsan ee muddada dheer ka jiray kana jira weli dalka Soomaaliya.
Previous PostCudurkii Filanwaa Next Postfarsama-yaqaanada timaha jara